Ongaziwa ku-inthanethi: Akunakwenzeka? > UVielhuber David
Ongaziwa ku-inthanethi: Akunakwenzeka?09
Ezikhathini zehlazo le-NSA, akubona kuphela abasebenzisi be-network-savvy abazibuza ukuthi umuntu angahamba kanjani kwi-Intanethi ngokungaziwa ukuze abalekele ukuxokozela kokuqoqwa kwedatha kweziphathimandla nezinsizakalo eziyimfihlo. Kodwa-ke, lokhu kuvame ukuholela emaphutheni nasekuqageleni okungalungile. Umbono oyiphutha ophakathi nendawo wukunciphisa ukungaziwa ekugqanyisweni kwekheli le-IP.
Kuneminye imingcele ehlukahlukene edlala indima ebalulekile hhayi kuphela embonini yezokukhangisa ekuqapheliseni abasebenzisi: Ngokungeziwe kumakhukhi, ukuthayipha iminwe kwesiphequluli kudlala indima enkulu ngokuya phambili. Wonke umsebenzisi ushiya ngemuva inhlanganisela evame ukwehluka yezici eziningi ezifana nesiphequluli, ukulungiswa kwesikrini nokunye okuningi kumafonti afakiwe. I-Panopticlick ikhombisa lokhu ngokumangazayo. Kokulandelayo, ngizozikhawulela ekufinyeleleni kwekheli le-IP futhi ngibonise izindlela ezine zokufihla le datha yomuntu siqu eziteshini ezikude:
Iseva yommeleli: Ama-proxies asebenza njengabambeli futhi adlulisele ithrafikhi yawo yedatha endaweni okuyiwa kuyo uqobo. Ngokungeziwe kumaseva wommeleli womphakathi, izinsizakalo ezahlukahlukene ezinjenge- CheapPrivateProxies zinikela ngama- proxies ayimfihlo. Kuzo zonke izimo kufanele ubeke ithemba elikhulu kubahlinzeki, ikakhulu abazinze phesheya. Ukuhlaselwa komuntu phakathi nendawo nezimbiza zoju yizingozi ezimbili nje ezingashiwo kuleli phuzu.
Izinsizakalo ze-VPN: Ngekhadi lenethiwekhi elengeziwe, lonke ithrafikhi yedatha (evame ukubethelwa ngokugcwele) idluliselwa esangweni le-VPN - lokhu kusho ukuvikelwa okukhulu kakhulu nejubane kuneseva elibamba, kepha futhi kubeka ukuthembela kumhlinzeki we-VPN njengo- FIHLA .IO phambili. Ezimweni eziningi, abahlinzeki, ngokungafani nezithembiso zabo eziphelele, bakhiphe idatha yomsebenzisi kuziphathimandla, yingakho lonke ilungelo lokuba khona liwa njengendlu yamakhadi.
Umzila we-anyanisi: Ngezikhathi zamaqembu e-crypto, inani labasebenzisi bephrojekthi yeTor lenyuke kakhulu. Lapha, amaphakethe wedatha ahanjiswa ngeziteshi eziningi eziphakathi (ama-node), nawo angawazi wonke umzila osuka emthonjeni uya lapho uya khona. Ububi: Yonke idatha edlula umugqa (uma kungenzeka ingabhalwanga) kumele idlule indawo yokugcina, leyo ebizwa ngokuthi indawo yokuphuma - futhi lokhu kungafunda konke ngaphandle kwesenzo esengeziwe. Abashushisi bezobugebengu bazitholele bona uTor - futhi bakhomba abasebenzisi.
IMix-Kaskaden: Inkampani eyaziwayo kuphela ethatha le ndlela yiJonDonym . Ama-cascades wokuxuba amaseva axhunyiwe atholakala emazweni ahlukahlukene futhi ahloliwe futhi aqinisekiswa yi-opharetha. Ukungena ekuhlanganeni kwe-mix kuzodingeka ukuthi kusho ukuthi zonke izingxenye ze-cascade zingaphansi kweziphathimandla, okuyinto engenakwenzeka kakhulu ngenxa yokungafani kwendawo kwamaseva. Ububi yintengo ephezulu abasebenzisi abazimele okufanele bayikhokhele insizakalo yezentengiso.
Ukukubeka ngamafuphi: ukungaziwa ngokuphelele akunakwenzeka. Noma usebenza ngokuzwela ngezinsizakalo ezikwi-Intanethi njengamanethiwekhi omphakathi, usaqhubeka kwi-Intanethi bese ushiya ngokuzenzakalela imikhondo engahlolwa ngemuva kwesikhathi esilinganiselwe, noma ngabe ibhalwe ngemfihlo. Yize izinyathelo ezingenhla (futhi ikakhulukazi inhlanganisela yazo) zingenza ukulandela umkhondo kube nzima kakhulu, umsebenzisi we-Intanethi ongaziwa ngokuphelele uyinganekwane.